२ वर्षको प्रगाढ प्रेम : विवाह अस्वीकार गर्दा हत्या « Janata Samachar
काठमाडौं । ताप्लेजुङको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका-२ फूलबारीकी १९ वर्षीया मन्दिरा अधिकारी सदाझै आफ्नै काममा व्यस्त थिइन् । सधैँ झै घरकै काममा व्यस्त रहने मन्दिरा, मंसिर १७ गते विहान अन्य दिनभन्दा चाँडै उठिन् । घर सफा गरिन् चिया पकाइन् । त्यसपछि आमा कृष्णमायालाई बोलाउन ओछ्यानमै पुगिन् । सधैं ढिलो उठ्ने छोरी आफूभन्दा पहिले उठेर बोलाउँदा आमा पनि दंग परिन् । दिउँसो दिदी एलिसा, मन्दिरा र आमा तिनैजना मिलेर आँगनकै खलोमा मास कुटेका थिए । बुवा नन्दकुमार कामको सिलसिलामा सदरमुकाम फुङलिङ गएका थिए । आमा कृष्णमायाका अनुसार भोलिपल्ट छिमेकीको पर्म जानुपर्ने थियो । अघिल्लो दिनमै छोरी मन्दिरालाई आमाले पर्म तिर्न जानु भनेकी थिइन् । त्यसको भोलिपल्ट नै मन्दिरा बेपत्ता भइन् ।
परिवारका अनुसार मन्दिरा बेपत्ता भएकै दिन दिदी एलिसाको फेसबुकमा म्यासेज आयो । म्यासेजमा थियो झापाको हल्दीवारीस्थित नारायण पौडेलको छोरा दीपकसँग विवाह गरेको छु भनी । म्यासेजपछि परिवार छोरीले विवाह गरेको भनेको केटा र उनको पारिवारिक अवस्था बुझ्न झापा पुगे । तर मन्दिरा त्यहाँ थिइनन् ।
दिदीकै फेसबुकमा फेरि अर्काे म्यासेज आयो । मन्दिरा अर्का युवकसँग भारत पुगेको भनेर । सो म्यासेज आएपछि मन्दिराको परिवार आश्चर्य चकित भए । घरबाट बाहिर ननिस्कने, कोही नचिनेको मान्छेसँग नबोल्ने छोरीको अविश्वस्नीय सन्देशले परिवार थप सशंकित भए ।
कसरी आयो मन्दिराको मोबाइलबाट म्यासेज ?
बेपत्ता मन्दिराको कुनै अत्तो पत्तो लागेन । परिवार केही गलत नभैदियोस् भनेर प्रार्थना गर्दै थिए । प्रहरी निरन्तर अनुसन्धानमा थियो । परिवारको बेचैनी र छटपटी बढ्दो थियो । यसैबीच प्रहरीले मन्दिराका दाइ पर्ने रमेश अधिकारीलाई पक्राउ ग¥यो । परिवार झनै आश्चर्य चकित भयो । किन ? पक्राउ गरेको होला भन्ने परिवारलाई समेत लागेको थियो । किनकी घटना भएकै दिन रमेशले पनि आफूलाई कसैको अपहरणमा परेको बताएका थिए । प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने क्रममा मन्दिरा बेपत्ता भएको र रमेशले आफू अपहरणमा परेको दिन एउटै भएपछि अनुसन्धानकाे सुइरो रमेशतर्फ तेर्सायो ।
ताप्लेजुङका प्रहरी नायव उपरीक्षक ज्ञानेन्द्र फुयाँलका अनुसार मन्दिरालाई बेपत्ता पारेको अभियोगमा दाजु नाताका रमेश अधिकारी पक्राउ परे । पक्राउ पछि प्रहरी अनुसन्धानबाट जे जे कुरा खुल्यो त्यसपछि प्रहरीदेखि परिवारसम्म आश्चर्य चकित भए । प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा रमेश र मन्दिराबीच प्रेम सम्बन्ध रहेको खुलेको छ । प्रहरीका अनुसार मन्दिरा र रमेशले बिहे गर्नेसम्म योजना बनाएका थिए तर दुवै अधिकारी भएकाले हाडनाता भित्र बिहे गर्न नमिल्ने कुराले तनाबमा थिए । अन्ततः रमेशले मन्दिराको हत्या गरि उनकै मोवाइलबाट मन्दिराकी दिदिलाई म्यासेज गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
रमेशको बयानपछि उनलाई लिएर घटनास्थल पुगेको प्रहरीले घटनास्थलमा मन्दिराले लगाएको आउटर, कपालमा लगाउने चिम्टी, चप्पल, पुरुषले हातमा लगाउने पञ्जा र मन्दिराले कानमा लगाएको टप फेला पारेको छ । प्रहरीले रमेशकै बयानका आधारमा मन्दिराको हत्या भएको पत्ता लगाउन सफल भएको हो ।
मन्दिरा परिवारका अनुसार हाङपाङका रमेश मन्दिराको घरमा बसेर गुप्तेश्वर माविमा अध्यापन गर्थे । उनी पेशाले शिक्षक थिए । परिवारले रमेशलाई छोरा सरह मानेर राखेका थिए । मन्दिराका बाबुले रमेशलाई दसैंमा छोरा मानेर टीका लगाइदिएका थिए भने तिहारमा मन्दिराले भाइटीका समेत लगाइ दिएकी थिइन् । छोरीले दाजु र आफूहरुले छोराको रुपमा स्वीकार गरेको मन्दिराका बाबु बताउँछन् ।
रमेशले प्रहरीलाई दिएको बयानअनुसार रमेशको मंसिर २५ गते विवाह तय भएको थियो । विवाहका सामान खरिद गर्न उनी मंसिर १७ गते फुङलिङ बजार गएका थिए । बजारबाट फर्कने क्रममा मन्दिरालाई फोन गरि पुलमा भेट्ने योजना बनाएका थिए । सोही योजनाअनुसार उनीहरुबीच भेट भएको थियो । भेटका क्रममा मन्दिरा र रमेशबीच विवाहका विषयमा विवाद भयो । हाड नाताका कारण विवाह सम्भव नभएको रमेशले मन्दिरालाई भनेका थिए । तर मन्दिरा भने २ वर्षको प्रेम सफल बनाउनुपर्छ भन्ने आग्रह गरिन् । सोही विवादमा उनीहरुबीच झगडा भयो । झगडाकै क्रममा रमेशले मन्दिराको हत्या गरे । मन्दिराको हत्या गरेर उनले शव झोलंगे पुलबाट तमोर नदीमा फालिदिएको प्रहरी उपरीक्षक फुयाँलले जानकारी दिए ।
मन्दिराको हत्यापछि रमेशले अरुले थाहा पाउने डरले आफू अपहरणमा परेको नाटक गरेका थिए । मन्दिराको परिवार यतिबेला अकल्पनिय बज्रपातको घटनापछि शोकमा डुबेको छ ।